Umndeni awuneme ngokuphathwa kwecala | News24
Umndeni awuneme ngokuphathwa kwecala
ISITHOMBE: sithunyelwe UNksz Nompilo Ndlovu owabulawa ngesihluke eMbali ngo 2013.
UKHALA ngokwenzelwa phansi ingalo yomthetho umndeni wakwaNdlovu e-Unit 2 eMbali emva kokuba osolwa ngokubulala ashise indodakazi yawo ngo-2013, engaphandle yize kuthiwa wazivumela yena icala.
UNksz Nompilo Ndlovu owayeneminyaka engama-23 kwenzeka isigameko, wabulawa ngesihluku sokunqunywa nokushiswa waqede wagqitshwa ngemumva kwendlu yangasese yakubokammangalelwa.
UMnu Thamsanqa Ntenza uvele kafushane eNkantolo kamantshi ngoMsombuluko okugcine ngokuthi icala lihlehliselwe umhlaka-23 kule nyanga ngoba kuthiwa umphathi wecala akalandelanga imigudu efanele yokuphenya icala.
Ummangalelwa kuthiwa emva kokuba ephume ngebheyili ngo-2014 uke wazama ukushayisa umalume wakhe ngemoto ngoNdasa (March) walo nyaka, njengoba ebengomunye wofakazi.
Ekhuluma ne-Echo unina kamufi uNksz Gida Ndlovu uthe akagculisekile ngendlela leli cala eliphethwe ngayo, njengoba ummangalelwa engakaze abuthule ubufakazi phambi kwenkantolo kusukela leli cala langena enkantolo ngo-2014.
Uthe umufi wasukelwa ummangalelwa ezibuyela endaweni yokucima ukoma ngomhlaka 26 Zibandlela (December) owafike wamlandela wamdonsa, waze wayombulalela kubo.
“Akusavumi nokuthi ngidle uma ngicabanga ngesihluku indodakazi yami eyabulawa ngaso, kodwa icala liluke lihlehliswa futhi umsolwa uliqula engaphandle. Okufike kubulale kakhulu umphefumulo wami ukuthi umsolwa wazivumela yena emaphoyiseni emva kokuba kutholakale isidumbu sigqitshwe emva kwendlu yakubo.
“Selokhu langena enkantolo, akakhulumi lutho, ukhulunyelwa abammeli kuze kube icala liyahlehliswa. Sesiphelelwe ithemba ngoba sibona sengathi umthetho uhudula izinyawo.
“NgoMsombuluko obekufanele umsolwa athule ngabo ubufakazi, kugcine sekukhulunywa ngezinsolo zokuzama ukushayisa ngemoto omunye wofakazi, esikhundleni sokuthi kukhulunywe ngecala lokubulala. Sihlukumezekile kakhulu njengomndeni ngoba kusho ukuthi kufanele uze ube nemali ukuze kwenzeke ubulungiswa.
“Ukuhudulwa kwezinyawo ekuquleni leli cala nami kungibuyisela emuva ngoba angikwazi ukuqhubeka nempilo ngikhohlwe okwenzeka,” kusho yena.
Amalungu omphakathi akhulume nephephandaba kepha angathandanga ukudalulwa athe aweneme ngendlela leli cala elisingethwe ngalo, njengoba umsolwa engaphandle ngemibandela yokuthi akasondeli eMbali, bathi kodwa uyaqhubeka nokubonakala endaweni.
“Abangani bamufi sebesabela izimpilo zabo ngoba umsolwa usaqhubeka nokubonakala la. Isigameko sakamuva sokusabisa ufakazi ngokuzama ukumshayisa ngemoto sikhombisa ngokusobala ukuthi asiphephile.
“Kunokuthi leli cala liye phambili, sibona sengathi bakhathazeke kakhulu ngokuphepha kwakho kunecala alenza. Umthetho awudlale indawo yawo, kade sigqigqa enkantolo singayiboni indlela eya phambili,” kusho ilungu lo mphakathi